Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Halgamoow-Kor Uqaadida Karaamada Halganku, Waa Kor Uqaadida Karaamadaada + Suugaan- By: Xaaji M/rashiid
Maqaal: Halgamoow-Kor Uqaadida Karaamada Halganku, Waa Kor Uqaadida Karaamadaada + Suugaan- By: Xaaji M/rashiid
Posted by ONA Admin	/ October 17, 2018
Marka hore aan bidhaamiyo meeqaanka halganka gobanimodoon ee Ogadenya kasocda iyo wixii dad ama duunyo ahaa ee kubaxay. Horta ilaahay umbaa si dhab ah u xisaabin kara, laakiin waxaan ogahay inuu sahayday Rag iyo dumar tirobadan, sidoo kale wuxuu sahayday hanti mood iyo noolba leh oo wabiyaal rogi lahaa. Waxaa ugubtay Guryo waxaana loo dhacay beero iyo dhul farabadan oo bulshadu lahayd. Waxaa loo qixiyay dadwayne aad ufarabdan.
Inta u dhaawacantay iyagu meel walba way daadsanyihiin. Sidoo kale inta xabsiyada ugashay gaalo iyo islaamba way ka argagaxeen! Intaa waxaa dheer in dadka oo dhan loo wada hanjabay xataa caruurtii waxaraha raacaysayna dhahoo! Murugada iyo ciilka dadkeena la baday iyagu waxay ahaayeeen sida qadada, qureecda iyo cashada oo kale! Waxaa intaas oo dhan kasii wada darnaa in gabi ahaamba la duudsiyay jiritaankooda soomalinimo iyo islaanimo.
Sidaad la socotaan Calaamadda halganku caanka kuyahay waa Qalin iyo Qori, balse waqtigan lajoogo waxaa la ogyahay inuu qorigu tiirsanyahay, balse Qalinka shaqadiisu ay socto. Hadaba marxaladani waa mid laba afleh, kan hore hadii laga faa’iideysto waa guul soo hoyatay, kan labaadna waa hadii la is dhigto oo lagu mashquulo danaha gaarka ah iyo bal nafta uyara raaxee, sidaana fursadii ku habeensato, taasina waa guuldarro soo hoyatay.
Waxaa la isla qirsanyahay inuu wadanka Ogadenya iyo dadkiisu ay dhexmirnayaan dib udhac baaxad leh oon haysanin dadyowga Afrikada kale, hadii laga eego dhinac walba. Tusaale- Caruurta Gobolku lamasina caruuraha Afrikada hadaad ka eegto dhanka waxbarashada iyo mooraalkaba, si loo gaadhsiiyo mustaqbal kii hore ka qiimi badan Halgamoow- Kor Uqaadida Karaamada Halganku, Waa Kor Uqaadida Karaamadaada.
Dhanka dumarka dalku waa kuwa ay sida tooska dhibaatadii guumaysigu utaabatay. Malaha ragu waxay ku dhaameen baadiyahay galeen iyagoo isdifaacaya, qaarna naftooday labaxsadeen, laakiin dumarku maadaama ay caruurtii hayeen way carari kari waayeen guryahaana loogu yimid oo sidii ladoono laga yeelay. Markaad barbar dhigto dumarka kale ee aduunka qiiraa ku madax mareysa, Bulsho dumarkeedu dayacan yihiina cawradeedu ma asturra. Hadaba si ay dumarkeenu uhelaan nolol wanaagsan, Halgamoow- Kor Uqaadida Karaamada Halganku, Waa Kor Uqaadida Karaamadaada.
HEESTAN HALAGU SII NASTO-
HALGANKAAN SUGAYOOW- SANADOOYIN FARABADAN
LOO WADA SAMRAAYOOW- SAAKAAD HILAACDEE
SIDAAN DOONI YEELOO- ISAGOOTI SAAXIIB…
SAFAR BAA LAGUU GALAY- SILIC BAA LAGUU MARAY
SAHAY BAA LAGUU SIDAY- SOORYAA LAGUU CUNAY
SAMAFALE WAXAAD TAHAY- DANEYSIGA KASAAHIDAY
SU’AASHII DADWAYNAHA- JAWAAB SUGAN KASIIYEE
SIQIIRBAA LAGUU DILAY- SAYNABAA LAGUU DABAY
SOOYAALKA TAARIIKH – SUMAD BAAD UYEESHEE
SIDAAN DOONI YEELOO- ISAGOOTI SAAXIIB.
Markii waxaas oo dhan laga yimaado adiga laftaadu dib u milicso taariikh nololeedkaaga waxaad ogaaneysaa inaad lasoo kulantay bahdil iyo hanjabaad. Waxaa kale ood fahmaysaa siday uliidato ku hoos noolaanshaha guumaystaha aan aqoonin wax xuquuq inasaan la yidhaaho. Bal dib u xusuuso waqtiyadii sida tooska ah laguu dulmay adiga ama qoyskaaga. Sidaa darteed, Halgamoow- Kor Uqaadida Karaamada Halganku, Waa Kor Uqaadida Karaamadaada.
Nolosha aduunku waxay sharaf ku leedahay inaad Rabigaa si sax u caabuddo, martidaadana aad magan,galiyo siin karto. Sidoo kale waxay sharaftu ku jirtaa in umaduhu kaa haybeystaan oyna kugu soo degdegin. Taa badalkeeda xaalka dadka iyo dalkuba waxay noqdeen Haad iyo Waraabe boob!. Dhulka Ogadenya dushiisa waxaas oo dhan ayaa kadhacay, hoostiisa waaba la inoo dhaafay waana loo malabsanayaa! Sidaad ogtihiin Dunida maanta awood baa shaqeynaysa si taa loo gaadho loogana hortago makriga la isu maleegayo, Halgamoow- Kor Uqaadida Karaamada Halganku, Waa Kor Uqaadida Karaamadaada.
Wadanka Itoobiya loogu yeedho wuxuu lamid ahaan jiray Goof mugdi ah oy goor walba dhici karto in lagaa qaniino, siyaasada furfuran ee hadeer socotana waa mid ay ka dhex kaluumeysanayaan aragtiyo badan oo kala duwan, Halgamaa kastana waa inuu sidaa ku xisaabtamaa. Si kastaba ha ahaatee mar haday siyaasiyiinta degaanka Somalidu muxaafid iyo mucaaradba Masiirka umadda ka midoobeen waxaan u arkaa inay guulaysan,doonaan idan Ilaahay.
Gabagabdii waxaa wanaagsan inuu halgamaagu is waydiiyo mustaqbalka jiilalka soo socda wuxuu xaalkoodu noqon doono hadii kuraasi lagu qanco doorkan?